आज यी ३ सुन्दरीको जन्मदिन ! सबैलाई जन्मदिनको शुभकामना - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
आज यी ३ सुन्दरीको जन्मदिन ! सबैलाई जन्मदिनको शुभकामना
शनिवार, साउन ३ २०७७
आज फिल्मी क्षेत्रका ३ सुन्दरीको जन्मदिन परेको छ । हेरौं उनीहरुको बारेमा रोचक तथ्य
इन्दिरा जोशी :
नेपाली चर्चित तथा लोकप्रिय गायिका इन्दिरा जोशीको आज जन्मदिन रहेको छ । गायिका जोशीको साउन ३ गते जन्मदिन भए पनि उनले सोमबारै आफू निकट र साथीसंगीलाइ मिठाई खुवाएकी थिइन् ।
पछिल्लो समय एपी वान टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेको ‘नेपाल आइडल’ की मुख्य जज हुन् । कान्तिपुर बेस्ट पपगायिका, डेरेना अवार्डस, नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण भएको ‘नेपाली तारा’ मा समेत उनले अवार्ड जितेकी छन् । सुरिलो स्वरसँगै नृत्यका कारण पनि गायिका जोशी निकै चर्चित छिन् ।
उनले आफ्नो जन्मदिन भने खुलाएकी छैनन् । उनका आफन्तहरूका अनुसार गायिका जोशी तीन दशक उमेर छेउछाउ पुगेकी छन् । सामाजिक सञ्जालमा उनी निकट कलाकार, गायक गायिकाले मंगलबार बिहानैदेखि जन्मदिनको शुभकामना दिइरहेका छन् ।
प्रियंका चोपडा :
बलिउडका साथै हलिउडमा पनि आफ्नो स्थान बनाउने ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपडाको आज (१८ जुलाई) मा जन्मदिन हो । उनी आजबाट ३८ वर्षमा लागेकी छिन् । प्रियंका चोपडाले जुन सफलता हात पारेकी छिन् त्यो हरेक युवतीका लागि प्रेरणादायी छ ।
‘दम लगा के हइसा’बाट बलिउडमा डेब्यू गरेकी अभिनेत्री भूमि पेडनेकरको आज जन्मदिन परेको छ । आजबाट उनी ३१ वर्षकी भएकी छिन् ।
उनले आयुष्मान देशराज जोशीसँग जोड लगाके हैसेबाट फिल्मी क्यारियरको सुरुवात गरेकी हुन् ।
लजालु स्वाभावको भुमि मोटी भएकै कारण पर्दा पछाडीको काम गर्थिन् ।
पछि उक्त्त फिलिममा भूमिले मोटो केटीको भुमिका निर्वाह गरेकी थिइन् । यस फिल्ममा दर्शकहरूले उनको अभिनयको प्रशंसा पनि गरेका थियो ।
अंकिताले शेयर गरिन् प्री वेडिंग फोटो, फ्यानले भने, ‘मिस यु सुशान्त’
छोराको जन्मदिन मनाउन एक साथ भए आमिर र किरण
मोहनलालको फिल्मले रिलिज अगावै कमायो सय करोड